Edith Cowan University - Higher Education ná Mba Ọzọ na Australia
Edith Cowan University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1991
Echefukwala atụle Edith Cowan University
Idebanye aha na Edith Cowan University
t bụ na obi ụtọ dị ukwuu na m ekele unu ka Edith Cowan University.
Na ECU na-eduzi anyị anyị ji kpọrọ ihe nke iguzosi ike n'ezi, akwanyere, ò jụrụ ase onye mma. Anyị na-elekwasị anya ezi ihe ma na nnyocha bụ ndị sitere na njikọ aka na amụma mmekọrịta ya na ndị na ọtụtụ obodo anyị na-guzobere iji na-eje ozi.
Research na ECU gbatịrị ihe ọmụma na mma na àgwà nke ndụ maka ndị Australia na ndị mmadụ gafee n'ụwa. Anyị research-ebute ụzọ elekwasị anya na idozi ezigbo nsogbu ụwa gafee elekọta mmadụ, aku na uba, anụ ahụ na gburugburu ebe obibi ngalaba.
guzosie ike 1991, ECU ka toro ngwa ngwa n'ime a mma mahadum na nwa akwụkwọ maara akwụkwọ afọ ojuju na mba dị research.
Ụmụ akwụkwọ na ndị gụsịrị akwụkwọ na ECU bụ n'etiti ndị kasị mma n'ụwa, na ọtụtụ ojuju oké mkpa ọrụ anyị na otu. Ha gbara ọkpụrụkpụ e ghọtara ofụri Australia na mba site awards, enyem, scholarships na nwa anụmanụ.
ECU-agba mbọ ka ebuwanye ibu òkè na Mgbochi Ahụ na-igbochi entry muta, na anyị na-adịgide ọrụ anyị na nkwalite na mmepe nke ọzọ ntinye ụzọ na-elu-akụziri.
Anyị bụ ndị a na mahadum na abat di iche iche na nke a bụ ihe atụ anyị na multicultural amụrụ ìgwè na onwere a dịgasị iche iche nke afọ. Anyị na-akwado okike hara nhata na ECU na-aga n'ihu nke a nkwa site na anyị otu nke Athena Swan Charter na Australia.
M ka ị chọpụta ihe banyere otú ECU inyere gị aka iru gị nwere.
Prọfesọ Steve Chapman
Edith Cowan University (ECU) -enye ezigbo mmụta gburugburu ebe obibi maka ndị chọrọ nke ọma ná ndụ.
Emi odude ke Western Australia, anyị ụlọ ọrụ-mkpa na nkuzi na research, -akwado ọmụmụ gburugburu ebe obibi na inwe-emeri ụlọ ọrụ nwee ECU ụmụ akwụkwọ na-eme ihe karịrị nanị na-adị ndụ n'ụwa a - ha-eme nke ọma na ya.
guzosie ike 1991, ECU were ohere ịkpụgharị n'ụzọ agụmakwụkwọ ka elu e nye ya a pụrụ iche na egwu campus gburugburu ebe obibi.
ECU ọmụmụ na-mepụtara na ịchọ ndụmọdụ ụlọ ọrụ, na izi ihe mkpara nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụmahụ na netwọk. Ọ bụ ya mere ECU ụmụ akwụkwọ nwere ike na-atụ anya a pụrụ isi chọta ohere, fieldwork, practicums na ịkparịta ụka n'Ịntanet ihe dị ka akụkụ nke ọmụmụ ha.
Nke a na obibia e utịp na ise kpakpando ratings maka ịkụziri àgwà na n'oge gara aga afọ asaa, tinyere anọgide elu ratings maka gụsịrị akwụkwọ afọ ojuju na ọnyà nkà, dị ka a kọrọ na Ezi Universities Guide.
ECU ụwa-klas nnyocha na-agbalị ime ka a dị iche obodo ya Western Australia na karịrị. ECU na-elekwasị anya na-arụ ọrụ anyị obodo, azụmahịa na ọchịchị òtù na-edozi real-nsogbu ụwa.
The University aha mgbe Edith Cowan Dirksey, nwaanyị mbụ na-hoputara ka onye Australia nzuko omeiwu. Ndụ ya na-raara nye nkwenkwe na agụmakwụkwọ bụ isi ihe na-ibu, mgbanwe na mma n'etiti ọha mmadụ.
Ya atụ agwa ECU ụkpụrụ dị ka anyị ji onwe anyị na-emepe emepe ike gụsịrị akwụkwọ bụ ndị opu aku na ndụ na-na obodo ha bi na ya na-arụ ọrụ.
Na a ilekiri
ECU nwere ihe karịrị 27,000 Undergraduate na Postgraduate ụmụ akwụkwọ. Anyị na-kwa afo ịnabata n'elu 4,000 mba ụmụ akwụkwọ, si ihe karịrị 100 mba.
site 2016, anyị asatọ Schools ga ịgụnye anapụta ihe karịrị 300 iche iche ọmụmụ gafee Health & Medical Sciences, Engineering, Education, Arts & Humanities, Business & iwu, Nursing & midwifery, Science na Western Australian Academy of Performing Arts.
Ọmụmụ na-awa na anyị atọ campuses - Joondalup na Mount Lawley ke mepere Perth na South West Campus na Bunbury, 200km n'ebe ndịda nke bụ isi obodo. ECU nakwa awade a sara mbara ụlọ nke online ọmụmụ nhọrọ.
ECU incorporates na ụwa a ma ama Western Australian Academy of Performing Arts, ndị kasị ochie na kasị ewu ewu School of Education na Western Australia, ndị kasị ibu Nursing omume na State, na Kurongkurl Katitjin, anyị Centre maka Australian Ụmụ Amaala Education na Research.
School of Business na Iwu Broad ọzụzụ: Business na Iwu
School of Arts na Humanities Broad ọzụzụ: Communication, Arts, Humanities, Psychology, Social Sciences, Social Ọrụ, Mpụ na Justice
School of Education Broad ọzụzụ: Onye Ozizi akụziri Early Childhood, Primary na Secondary ụlọ akwụkwọ
School of Engineering Broad ọzụzụ: Full nso nke Engineering specializations
School of Medical na Health Sciences Broad ọzụzụ: Mmega Health Sciences, Medical Science, Biomedical Science, Speech Pathology na Paramedicine
School of Nursing na midwifery Broad ọzụzụ: Nursing na midwifery
School of Science Broad ọzụzụ: Biology na Environmental Sciences, Mgbakọ na mwepụ, physics, n'ihi mmiri ọgwụ, Computing na Nche Sciences
Western Australian Academy nke Ịrụ Arts Broad ọzụzụ: Full nso nke n'ịrụ nkà na yiri specialties
The malite nke Edith Cowan University ụbọchị azụ 1902 na na nguzobe nke Claremont Teachers College, mbụ tertiary agụmakwụkwọ alụmdi na Western Australia.
Ọzọ nkụzi ọzụzụ kọleji a kpụrụ ihe karịrị afọ, na nsonye Graylands Teachers College (GTC), na Western Australian Secondary Teachers College (WASTC), Nedlands College of Advanced Education (NCAE), Mount Lawley Teachers College (MLTC) na Churchlands Teachers College.
na 1982 ndị a kọleji nile merged na-etolite na Western Australian College of Advanced Education (WACAE) – na campuses na Churchlands, Nedlands, Claremont, Bunbury na Joondalup.
Western Australian College of Advanced Education (WACAE) e nyere mahadum ọnọdụ on 1 January 1991 ma gbanwee aha ya ka Edith Cowan University.
Edith Cowan University aha mgbe nwaanyị mbụ na-hoputara na Australian nzuko omeiwu, Edith Dircksey Cowan, na bụ nanị Australian mahadum aha ya bụ mgbe a nwaanyị. Cowan rụsiri ọrụ ike ka na-ewelite ego maka ụmụ akwụkwọ ịga mahadum ọzọ na-ekwu, tupu a mahadum na-ewu na Western Australia, inweta ọchịchị nkwado maka ya atụmatụ. Ya-arụ ọrụ na mpaghara ebe a na-kwetara site akpọ Western Australia kasị ochie agụmakwụkwọ alụmdi na Kacha ọhụrụ mahadum mgbe ya, nakwa dị ka ya image na-kwukwara na Australian $50 dee.
Cowan kweere na agụmakwụkwọ bụ isi ihe na-ibu, mgbanwe na mma na onyinye ya mmepe nke Western Australian akwụkwọ nke ịrịba. Ọ gbalịsiri ike nweta na-elekọta mmadụ ikpe ziri ezi na campaigned maka ikike nke ndị inyom, ụmụaka na ezinụlọ, maka ndị ogbenye, na-agụghị oké akwụkwọ na ndị agadi. Ọ na-akwalite mmekọahụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, mba ọdịmma, na guzobere nke nwa ọhụrụ ahụ ike emmepe, ma instrumental na inweta votes n'ihi na ndị inyom na Western Australia.
na 1991, mahadum zụrụ n'ụlọ Cowan, ya na di ya na ndị ezinụlọ biri na mkpokọta 20 afọ. Ụlọ e reconstructed na mahadum Joondalup Campus na enyem-aka nke West Coast College of TAFE, wughachiri ewughachi ụlọ e mepere 1997. Edith Cowan House, Building 20 na mahadum Joondalup Campus, ugbu a na-arụ usu na Peter Cowan Writer si Center.
Ị chọrọ atụle Edith Cowan University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Edith Cowan University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Edith Cowan University.